Sheet ipolishi yokugaya kunye nenkqubo yokugaya inkqubo yokuchaneka kwesiko ngokuchanekileyo
1. Ukucoca kukurabha umphezulu wento egutyungelweyo okanye ifilimu yokutyabeka ngemithombo yeendaba ekhuselayo enje nge sandpaper, ipumice, umgubo welitye ocolekileyo, njl.
2. Ukucoca yindlela yokulungisa esebenzisa umatshini, imichiza okanye iziphumo zombane ukunciphisa ubungqongqo bomsebenzi ukuze ufumane indawo eqaqambileyo egudileyo.
Indima yetsimbi ipolishi kunye namalungu okusila
-Umngundo ipolishi iya kuqala ukuphucula ukumelana banxibe kunye nokumelana kumphezulu sokubumbela, nokwandisa ubomi inkonzo ukungunda.
-Ukupholisha umngundo kunokuphucula ukuchaneka komphezulu womngundo, kuthintele ukuveliswa kweebreyithi, kunye nokunciphisa ukuvela kweemveliso ezineziphene.
-Ukuba isikhunta, ipolishi inokunciphisa ukumelana nentlaka kwaye yenze iimveliso zeplastikhi zibe lula ukunamathela. Ukunciphisa umjikelo wemveliso, ukuphucula ukusebenza ngokuchanekileyo, kunye nokugcina iindleko zamashishini.
-Ukuba ngumzi mveliso we-optical, ukungcola komngundo kunokuhlangabezana neemfuno zezakhono zokujonga kunye ne-aesthetics yomsebenzi kwindawo enkulu.
Izinto eziluncedo zenkonzo yetsimbi yokucoca i-Ouzhan
-Zonke iinkqubo zokucoca iphepha kunye nenkqubo yokugaya zixhomekeke kuhlolo lomgangatho olungqongqo.
-Ngokuya kwimizobo okanye iisampulu zokucoca iphepha kunye nokugaya.
Egqithileyo Iiphepha ze-OEM zentsimbi yokusika
Okulandelayo: Sheet iindawo metal ipolishi iinxalenye
I-aluminium emnyama eyenziwe ngo-6061-T6 ingumxube we-CNC machi ...